Ivenkile | ngeVisa + Umsebenzi + weenkonzo ze-CV zabaThengi
Sebenza kwaye uhlale kwelinye ilizwe
Ukhethwe kweyona ndawo ikhula ngokukhawuleza emhlabeni!
Ngaba ufuna ukuqala uBomi obungcono?
Eyona ndawo intle yeLizwe yezaHluko
Ivenkile - Inkampani yaseDubai City
Gcina ngeVisa + Umsebenzi + i-CV yeeNgcebiso. Nceda ukhethe indawo oya kuyo! Njengoko sinamawakawaka abantu abavela kwamanye amazwe abathetha ngokubanzi, ukusuka Indiya njengo Phakistan kunye ne-Saudi Arabia. Ngoku sinikezela ngenkonzo emangalisayo kubo bonke. Ke, nceda ujonge ukuba inkampani yaseDubai City inokwenzela ntoni. Njengombiza, uya kufuna ulwazi oluneenkcukacha ukufumana umsebenzi. Nangona kunjalo, iNkampani yeDubai City iyabonelela Izikhokelo zokukhutshwa. Apha ngezantsi kukho iVisa yethu kunye nomsebenzi kunye neenkonzo zeinshurensi zomsebenzi.
Sinethemba lokuba uza kuyikhetha ilizwe lakho elifanelekileyo. Kuluhlu lwethu, uya kuba nenqaku elingaphezulu komgangatho wokuhlala kunye nokusebenza njengomphambukeli. Ke, umzekelo, ungafudukela eJordani naseSaudi Arabia, eUnited States yaseMelika naseUnited Kingdom.
Ungayisebenzisa njani iVenkile yethu?
Kuya kufuneka ucinge ngelizwe lakho elifanelekileyo onokuhlala kulo. Kuya kufuneka ukhethe iVisa yakho kwaye ungathenga iinkonzo kwiqela lethu. Ke kwicala elifanelekileyo, iqela lethu liya kukhathalela inkqubo yokufuduka kwenye indawo. Ke, kuya kufuneka ukhethe kwaye uthenge i-visa kwinkampani yethu. Ke iqela leNkampani yeDubai City yeqela leengcali lenza ezinye izinto eziyimfuneko zokukunceda ukuba ube ngumzi-mveliso kwi-United Arab Emirates.
Visa ukuya eMbindi Mpuma
I-Visa kwi-Mbindi Mpuma
Visa ukuya eMbindi Mpuma kunye nenkampani yesixeko saseDubai. Ngokuthetha nje ngokubanzi unokuba nenketho yokumenyelwa kwelinye lawona mazwe aphambili kunye nelona lizwe lidumileyo kuMbindi Mpuma. Inkampani yethu inceda abasebenzi bamanye amazwe ukuba bafumane umsebenzi eKuwait, Saudi Arabia, United Arab Emirate eLebhanon nasePalestina. Ngokuthetha ngokubanzi ukuba ujonge ukufumana iphepha-mvume lokuya kwelinye lamazwe aziwa kakhulu kwaye yenye yezona ndawo zingcono zomsebenzi kwaye ushiye usapho kunye nophando lwakho. Ungayikhetha loo ndlela kunye neDubai yokufumana ithuba lomsebenzi.
Sebenza kuMbindi Mpuma! Thulula namhlanje!
Ke, ukuba ungumsebenzi welinye ilizwe kwaye ujonge ukufumana amathuba amahle emisebenzi kuMbindi Mpuma. Inkampani yedolophu yaseDubai inceda abantu abavela ePakistan Saudi Arabia. Ngapha koko, iDubai kunye nakumazwe angaphandle anjengeKuwait neLebhanon. Sinceda abantu bonke ukuba bafumane kwaye babambe imisebenzi yolawulo esemgangathweni kunye nemisebenzi eluhlaza. Ke silapha ukukunceda kangangoko sinokuba nakho ukuba ngumsebenzi ophumeleleyo ngokukubonelela ngamathuba eVisa kwilizwe lakho elikhethiweyo. Uya kuba nenketho yokuzikhetha kumazwe anexabiso eliphakamileyo aqesha ii-expats.
Sinethemba lokukubona eDubai okanye e-Abu Dhabi. Eli lilizwe lethu eliphambili apho singakubeka khona kwaye sikunike iVisa.
Into ekufuneka uyenzile kukuyalela i-Visa nje. Emva koko yongeza i-visa yakho kwinqwelo. Emva koko yenza intlawulo. Kwaye emva koko bhabhela kwindawo oyikhethileyo. Yiloo nto wonke umntu ofuna ukuba ngumsebenzi ophumeleleyo.
Nantoni na enye oyifunayo (97)
Izikhumbuzo zeDubai (76)
Ukukhangela kukaJobe (1)
iingubo zemuslim (158)
Ukuhamba ngebhasikithi yokuHamba kunye neTyesi (264)
Visa ukuya eMbindi Mpuma (15)
iimpahla zomsebenzi (38)